1. About pastries Nemutambo wemufaro Inokosha Nekuti hwema hwezvingwa hunozadza imba uye hunogadzira kudziya kwekubata mumwaka unouya. Asi izvo zvinosanganiswa mumakeke zvinoita kuti zvive zvakanaka kudya uye kuwedzera kutsva hazvidzivirike buttermilk. Panzvimbo pekuzvitenga kuchitoro kana kubheka. Ngaarege kutaridzika kunge akakosha uye awane yakasarudzika kuravira Nhasi tave kuzokuudza maitiro ekuita nyore buttermilk yekushongedza mafekita kugadzira kunyemwerera uye mufaro. Chii chinonzi buttermilk?
2. Ngatitorei kuti tizive chinonzi buttermilk kutanga. Ndiyo midziyo inowanzoshandiswa mukubheka nemakeke. Iyo inozivikanwawo setireti miswe Ndiwo zororo kubva mukugadzira ruomba kirimu. Uku kunodaidzwa kuti kukochekera, uye rwese rwakasara rwuri buttermilk. Maumbirwo uye kuumbwa kwaro kwakafanana nemukaka wakakwenenzverwa. Kana mukaka wakasviba Dzimwe nzvimbo senge Europe Inoshandiswa zvakanyanya mukubika Uye vamwe vanhu vanofarira kuinwa nekuti ine mabhenefiti akafanana nemukaka, asi haina mafuta. Midziyo yebutiri • Shandisa mukombe 1 mukaka wakazara, usina mukaka (2% mafuta) mukaka tafura
3. Nzira yekugadzira bhitimaki yemumba Dururira 1 punipuni yejusi remoni kana vinaigrette pa1 mukombe wemukaka, zviri nyore pachena kana 2% mukaka wakakora, asi mukaka wakasviba hauna kukodzera. Nekuti isu tinoshandisa mafuta kukonzera maitiro
4. Mutsa zvinoshandiswa pamwe chete uye siya kwemaminetsi mashanu kusvika gumi, ndokurumidzira nekukurumidza nepuni yekuyera. Kusvikira mukaka watanga kuwumbana kuita tumapundu tudiki. Kusvika yatanga kukora Inoshandiswa Maitiro ekugadzira yedu yemumba buttermilk. Inogona kupa mhedzisiro isina kusimba seiya yakatengwa kuzvitoro. Asi tenda mukuchena Uye akachena echisikirwo evhu akasanganiswa nehanya kugadzira yakanakisa inonaka yemhuri dhizeti yezvinhu.
5. Menyu yakagadzirwa neyakagadzirwa buttermilk Kune akawanda mamamus anoshandisa ekugadzirira buttermilk. Dururira pamusoro pemapancake, shongedza nemuchero neuchi. Ipapo iwe unowana yakakosha mapakeji mapakeji ayo ese ari maviri anotapira uye anonhuwirira nekunaka kushoma uye kwakaomarara kuravira kunogona kudyiwa nemhuri yese.
6. Kana kuisanganisa mu mbatatisi yakashambadza uye unomumudzira pamwechete kuita nyama imwe. Inoshandirwa nembabvu dzakabikwa Zvichava zvinonaka zvinoshamisa. Shongedza yakanaka yakanaka keke mukati megore Idzva Evha mutambo. Ichokwadi kuti ichaita iyo dhayidhi yemhando Zvinotonyanya kukosha, zvinogona kugadzirwa nemhuri yako uye nevana zvakare .. Rega iro remukati bhotoroya riwedzere kunaka kwechikafu chako. Zviite iwe pachako, chic